5 Faa'iidooyinka La Yaabka leh ee Isticmaalka Qalinka CBD Vape • Daroogada Inc.eu
CBD, soo gaabin cannabidiol, waxaa loola jeedaa walax dabiici ah oo laga helo xashiishadda. Waxay ka timaaddaa dhirta hemp. Maanta, waxaad ka heli kartaa saliidda CBD alaabada quruxda sida kareemada iyo bambooyinka qubeyska, cuntooyinka, tinctures -ka iyo uumiga. Ma aha mid nafsiyadeed ama maandooriye ah. Guryaha CBD waxay ku habboon yihiin inay taageeraan xaaladaha sida welwelka, niyad -jabka, cudurada iswada, suuxdinta, dhanjafka, bararka iyo xanuunka daba dheeraada. Oo hadda qalimaankii vape-ga CBD-ka ayaa jira, uma muuqato inay adag tahay mar dambe si loo helo faa'iidooyinka ugu wanaagsan ee CBD.adhigaSi aad qalimaanta u sii xoojiso, waa kuwan shanta faa'iidooyin ee layaabka leh ee ugu sarreeya ee la xiriira iyaga.
1 Daaweynta CBD ee La Ansixiyay ee Walaaca
2 Qalimaannada vape CBD waxay u shaqeeyaan si dhakhso ah waxayna leeyihiin terpenes dheeraad ah
3 Beddel ka fiican sigaar cabista
4 Ku raaxayso Qalinka CBD Vape Meel kasta
5 Waxay kaa caawin doontaa inaad lacag keydiso mustaqbalka fog
6 Sida qoraalka dambe
Daaweynta CBD ee La Ansixiyay ee Walaaca
Xashiishadda ayaa muddo dheer loo adeegsan jiray in lagu daaweeyo walaaca. In kasta oo loo baahan yahay cilmi-baaris dheeri ah, ku dhawaad ​​dhammaan daraasadihii ugu dambeeyay waxay tilmaameen faa'iidooyinka xashiishadda ee cuduro badan oo welwel leh, oo ay ku jiraan jirro welwel oo guud ah, khalkhal xilliyeed oo saameynaya, jahwareer argagax, iyo jahwareerka walbahaarka kadib.
Daraasad la sameeyay 2018 ayaa lagu ogaaday in cannabidiol uu awooday inuu si wax ku ool ah u baabi'iyo walaaca iyo walwalka ugu yaraan 60% dadka. Laakiin waa inay ku qaataan qiyaas sax ah. Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa inay tahay fikrad wanaagsan in la sameeyo taangiyada vape si aad u iibsato si aad awood ugu yeelatid inaad tan si fiican wax uga qaadato.
Qalimaannada vape CBD waxay u shaqeeyaan si dhakhso ah waxayna leeyihiin terpenes dheeraad ah
Markaad qaadatid cannabidiol, dhiiggaagu wuu nuugaa, oo heerka uu nuugo wuxuu caan ku yahay bioavailability. Boqolleydan qalimaannada vape -ga CBD ayaa ugu sarreysa marka la barbar dhigo tinctures, saliid ama cunno. Markaad bilowdo daawada neefsashadaiyo, sambabadaada u qaado cannabinoids kuwa ku jira qalimaankan waa kuwo deg deg ah oo aad u dhaqso badan. Markaa saameyntu waxay ku bilaabataa 10-15 daqiiqo gudahood, halka alaabooyinka kale ee CBD ay qaadan karaan ugu yaraan 30 daqiiqo kahor intaanay muujin saamaynta.
Intaa waxaa dheer, qalimaan vape ayaa la heli karaa iyadoo qaar lagu daray terpenes, iyaga oo ka dhigaya kuwo aad waxtar u leh siinta saamayn firfircoon oo kor u qaadaysa. Terpenes waxay leeyihiin dhadhan aad u khafiif ah. Tan ugu muhiimsan, qalimaannada vape -ga CBD -ku sare uma qaadi doonaan maxaa yeelay waa xor THC.
Beddel ka fiican sigaar cabista
Mid ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee adeegsiga uumiga ayaa ah inay bixiso khibrad saafi ah. Waxay u kululaysaa xashiishadda heer ay uumi -baxdo cannabinoids -ka iyada oo aan gubin agabka dhirta. Sidaas darteed, uumiga kuma jiro daamur, kaarboon monoksaydh ama sunta waxyeellada leh marka la barbar dhigo sigaarka.
Ka dib markii marijuana si caadi ah loo gubo, qiiqa soo baxa wuxuu ka kooban yahay qiyaastii 88% walxaha aan cannabinoid ahayn. Waxaa loola jeedaa in qayb yar oo kaliya ay ku dambayso qiiqa. Inta badan cannabinoids waxaa ku baaba'aa kuleylka inta la gubayo halkii laga sameyn lahaa walxo waxyeello u geysan kara.
Marka xashiishadda la uumi-baxo, uumiga waxaa ku jira qiyaastii 95% cannabinoid-ka, halka inta kale ee boqolkiiba shan ah laga sameeyay saliid lagama maarmaan aan sun ahayn. Marka uumiga xashiishadda saafiga ah ayaa markaa ku siin kara faa'iidooyin badan oo suurtagal ah.
Intaa waxaa dheer, dharkaaga iyo gurigaagu mar dambe ma uriyaan qiiq. Midda labaad, waxay ku gelineysaa qaab “qarsoodi ah” maadaama ay aad uga yar tahay uumiga oo aan aad u safrin kahor intuusan bilaabin kala firdhinta.
Ku raaxayso Qalinka CBD Vape Meel kasta
Isticmaalka uumiga uumiga waa mid aad u caqli badan, gaar ahaan haddii aad isticmaaleyso qalin vape. Maaddaama carafku uusan aad u fogeyn, sidoo kale uusan raagin ama dhuuqin, waa dadaal la'aan inaad qariso qalinka vape marka aad u baahato.
Soosaarka, iibinta iyo adeegsiga alaabada CBD waa sharci dalka Mareykanka sida ku cad Sharciga Beeraha ee 2018. Tani waxay suurtogal ka dhigaysaa in muddo dheer lagu foorariyo meelaha aan la xakamayn uumiga. Waa aalad waxtar u leh kuwa doonaya inay ku raaxaystaan ​​uumiga socodka.
Waxaa intaa dheer, waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo ah qalimaan vape maanta la heli karo sida qalimaan la buuxin karo oo la tuuri karo. Dooro midka adiga kugu habboon, si qarsoodi ah ugu rid jeebkaaga oo samee daaweyn dhadhan leh markasta oo aad rabto. Sidee qabow tahay?
Waxay kaa caawin doontaa inaad lacag keydiso mustaqbalka fog
Sidaan kor ku soo sheegnay, uumi -bixiyeyaashu waxay u muuqdaan kuwo aad waxtar u leh marka ay isku dayayaan inay ka faa'iidaystaan ​​xashiishadda. Maaha wax buunbuunin ah in la yiraahdo uumi-bixiyeyaasha ugu yaraan 30-40% ayaa ka waxtar badan hababka kale ee CBD sida isticmaalka saliidda ama tincture -ka iyo xitaa cuntooyinka.
Oo haddii aad eegto heerka wax -ku -oolnimada ee qiyaastii boqolkiiba soddon, taasi waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay qiyaastii saddex meelood meel haramaha ka yar intii caadiga ahayd. Waxay ku siin kartaa kayd aad u weyn waqti ka dib. Badbaadintaani waxay hubineysaa in uumi -bixiyuhu naftiisa bixiyo. Mararka qaarkood waxaad dib u soo ceshan kartaa qiimaha aaladda wax ka yar lix bilood, oo ku saleysan inta aad caadiyan isticmaasho.
Sida qoraalka dambe
Markaa haddii aadan wali ka fikirin qalimaannada vape CBD, waa waqtigii aad samaysay. Haddii aad ku qanacsan tahay, iibso qalinkaaga CBD vape maanta oo bilow inaad ku raaxaysato dhammaan faa'iidooyinka kor ku xusan. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sababta aadan hore ugu bilaabin qalimaanta vape. Iyo sida dhammaan waxyaabaha cusub, ku bilow qadar yar oo cannabidiol ah oo si tartiib tartiib ah u kordhi xaddiga si aad u harraadiso haraadkaaga oo aad dareento dareen gaar ah. Isticmaalka wax ka badan qiyaasta lagu taliyey ee CBD ee qalinka vape -ka dabcan ma aha ujeedka!
cabsiCBDsaliid cbdsigaar cabinadhiga
Sidee waxtar u leh CBD?
Waqti kasta iyo ka dib waxaan u boodnaa gabagabeyn annaga oo aan falanqeynaynin labada dhinac ee sawirka ...
Maxay caawin kartaa isticmaalka CBD? Kuwa kale oo ka mid ah 4tan dhibaato.
Cannabidiol (CBD) waa phytocannabinoid la helay XNUMX-yadii. Hadda waa la ogyahay ...
Kobaca weyn ee Xashiishadda Cannabis ayaa ah mid dejineysa isla markaana qaadaysa tallaabooyin fog-fog
(CNN Ganacsiga) Dadaalladii ugu dambeeyay ee Canopy Growth si loo yareeyo ganacsigeeda xashiishadda adduunka waxaa ka mid ah ...
Dalka Kariibiyaanka ee Saint Vincent ayaa dhoofiya shixnadihii ugu horreeyay ee xashiishadda